အခမဲ့ Forex VPS | Forex Trading ၏ Virtual Private Server ကို
ပင်မစာမျက်နှာ / Forex ကမ်းလှမ်းချက်များ / Forex ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကမ်းလှမ်း / အခမဲ့ VPS
VPS service ကို
FXCC မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များ VPS (virtual private server ကို) ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြု. ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်များနှင့်အဆောက်အဦးကိုဆက်ကပ်။ ကုန်သွယ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးဖို့ VPS ကို အသုံးပြု. သုံးခုအဓိကအရေးပါသောအားသာချက်ရှိပါတယ်; အမြန်နှုန်း, လုံခြုံရေးနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း။ ဤတွင်ဦးချင်းစီ၏အကျဉ်းအနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
FXCC ကုန်သွယ် application များအတွက်ရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးရန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြောင်းကွန်နက်ရှင်အမြန်နှုန်းကြုံနေရတစ်ခုအလွန်တတ်နိုင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းအဖြစ် hosting VPS ပေးပါသည်။ အောက်ပိုင်းအောင်းနေချိန်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်လုံးဝနီးပါးအကြားပိုမိုမြန်ဆန်ဆက်သွယ်မှုအာမခံ: ပွဲစားများ, ပလက်ဖောင်းထိုကဲ့သို့သော FXCC ရဲ့ ECNs အဖြစ်အဓိကပွဲစားနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကွန်ယက်များ, သိသိသာသာတိုးတက်ကုန်သွယ်မှု-order execution အတွက်ရလဒ်တွေကို။
အပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ် (နှင့်တဆင့်) MetaTrader, ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြင့် bespoke backend နှင့်ကုန်သွယ် software ကို အသုံးပြု. ပဲဖြစ်ဖြစ်, လုံခြုံရေး VPS application ကိုကုန်သွယ်၏အရေးပါသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ သိသာအမွေဆက်ခံအကျိုးအမြတ်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီပုဂ္ဂလိကစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို applications များတင်လုပ်ခံရဖို့နဲ့ Windows '' ဆာဗာ VPS တင်းပလိတ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ကျူးကျော်သူတွေကနှင့်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများကနေဆာဗာများနှင့်သုံးစွဲသူများနှစ်ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ updated နေကြသည်တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာ့ဒ်ဝဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးစွာသောစောင့်ရှောက်မှုအရေးပါသောအောင်မြင်မှုများကာကွယ်တားဆီးဖို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Hosted ဆာဗာများနှင့်ဗဟိုကွန်ယက်ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိစ္စများများအတွက် 24 /7စောင့်ကြည့်နေကြသည်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များနှင့် တွဲဖက်. 24 /7လူကြီးမင်းစီမံခန့်ခွဲရသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ် applications များ run ဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင် dedicated server ထားရှိခြင်းသည်, သင့်ကုန်သွယ်၏ချောမွေ့ပြေးသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအိမျကနေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအဝယ် website ကိုပြေးကြ၏, လျှင်, သင်သို့သော်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နှင့်သို့သော်သင့်ရဲ့ဖိုင်ဘာ optic Broadband connection ဖြင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအစာရှောငျစခွေငျးငှါ, သင့်အိမ်မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်အဖြစ်လုံလုံခြုံခြုံတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အမိန့်နှင့်သင့်ဈေးကွက်နှစ်ဆယ်လေးနာရီတစ်ရက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပေါ်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဆာဗာပေါ်မှာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပချင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏နေအိမ်ကွန်ပျူတာနှင့်ဘရော့ဘန်းနေ့ချင်းညချင်းကို turn off တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့စျေးကွက်ပိတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်စွမ်းတစ်ခုအလားတူအခြေအနေမျိုးင်; သူတို့ 24-7 ကုန်သွယ်မှုရန်ရှိသည် automated အစီအစဉ်များကို run မယ်ဆိုရင်, / s ဆာဗာအမြဲသင့်ရဲ့တဦးတည်းသီးခြားဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ဖို့ optimized နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမပို setup ကို, သို့မဟုတ် configuration များနှင့်အတူ, ဘယ်နေရာကနေမဆို VPS - Tools များနှင့်ပရိုတိုကောယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာသူတို့ရဲ့ dedicated server မှဆက်သွယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Remote Desktop လက်လှမ်းအဖြစ်ခြုံငုံ VPS service ကိုမှ built-in နေကြသည်။ အဆိုပါ VPS အပေါ် running ဆော့ဖ်ဝဲကြားဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ, PC များ, laptop, tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများ: ကုန်သည်ကြီးများကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များမှကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကိုရယူနိုငျပါသညျ။ VPS မျိုးစုံပလက်ဖောင်းများနှင့်အများအပြားအကောင့်အသုံးပြုသူ access ကိုလွှဲအပ်, တူညီတဲ့ VPS အပေါ်ကို set up နိုင်ပါတယ်အသုံးပြုခြင်း, မျိုးစုံအသုံးပြုသူများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း desktop ပေါ်မှာကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် alos သီးခြားနေရာများကနေအုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။
, သင့်အခမဲ့ VPS လျှောက်ထားရိုးရှင်းစွာကုန်သည်ကြီးများ Hub မှ login လုပ်ဖို့, ဖတ်ပါ စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ နှင့်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုပါစေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VPS Get